Kugadzira auto-moto zvibvumirano | Ruzivo runoshanda kumunhu wese.
Chirango chokusaisa gwaro kwemazuva 10.
Chirango chokusaisa gwaro kwemazuva 10. CoAp tarisa. . Chisungo 12.1. Kutya motokari isina kubhadharwa nenzira yakatemwa, motokari isina kupfuudza hutano hwehurumende ...
Inotora zvakadini kubudisa jeni. simba remupepeti wemotokari? Uye mutengi anogona here kubvisa kubva kubhuku?
Inotora zvakadini kubudisa jeni. simba remupepeti wemotokari? Uye mutengi anogona here kubvisa kubva kubhuku? Kuongorora mukati memakore ane chiuru, uye kana ukavimba, anogona kuita nezvose izvo ...
nzira yekudarika motokari mune junk?
Ndinofanira kutaurirana kutenga kwemotokari kana PTC ichinyorwa here? Zvose zvinokodzera. Uye sei kutarisa kuti nei kuverenga?
Ndinofanira kutaurirana kutenga kwemotokari kana PTC ichinyorwa here? Zvose zvinokodzera. Uye sei kutarisa kuti nei kuverenga? in gibedede inogona kurasikirwa yakanga iri munguva yedu, kudzokorora kwePTS hakusi isiri, t ...
Iko iko ikozvino kutenga nekutengesa b. y. iyo motokari?
Iko iko ikozvino kutenga nekutengesa b. y. iyo motokari? Kubva mubhuku iye zvino motokari haina kubvisa (kuchinja kwemitemo yekunyora) uye nzvimbo haina basa, kureva iwe unogona kutenga motokari muMoscow uye ...
Amai vanoda kunyoresa zvakare mota yemwanakomana wavo. Maitiro ekuita sei kuti iwedzere kuwana mapato maviri mapato, kutengesa uye kutenga. kana chimwe chinhu ???
Amai vanoda kugadzirisa zvakare motokari yemwanakomana wavo. Nzira yekuita kuti zvive zvakakosha zvikuru kune vose mapato kupa, kutenga uye kutengesa. kana chimwe chinhuzve? mari yakanaka. kana kuvimba Munguva pfupi yapfuura, mubvunzo unowanzomuka ...
vangani iye zvino muMoscow inhamba nhamba 555, 777 kana kusangana kupi zvako?
vangani iye zvino muMoscow inhamba nhamba 555, 777 kana kusangana kupi? enda kune chero ipi zvayo yezvekutengeserana MREO uye iwe uchataurirwa iyo yose yekutengeserana. Cool LLC, RAA, OMM, OOM, uye zvimwe zvacho zve ...
Ndezvipi zvinyorwa zvinodiwa kuti utenge motokari yakashandiswa?
Ndezvipi zvinyorwa zvinodiwa kuti utenge motokari yakashandiswa? pipisipoti yako mubvunzo wakanaka uye iwe unoda kubvunza nguva dzose ----- nguva dzose newe padhipiti-iwe unoda motokari uye unosangana paan notary gai, newe ...
Zvinokwanisika here kugumisa chibvumirano chekutenga motokari uye kutengesa?
Zvinokwanisika here kugumisa chibvumirano chekutenga motokari uye kutengesa? Zvingangodaro kwete, iwe hausi yemotokari itsva yakatora, zvaive zvakakodzera kufungidzira, pane SRT yekutaridzirwa kuitanira, kana iwe usinganzwisisi mumotokari ...
Zvinokwanisika kuronga motokari kune muduku here?
Zvinokwanisika kuronga motokari kune muduku here? apo gwenzi rekutengesa richada kubvumirwa kwebazi rekuchengetedza t kwauri kwauri kubva kwaari "kubvisa" pfuma yake Neyaka 14 zvinogoneka. Iwe haugone ...
Ndezvipi zvakakosha kubvisa-kurega motokari yezvimedu?
Ndezvipi zvakakosha kubvisa-kurega motokari yezvimedu? Iwe unobvisa nhamba, enda pamwe newe, PTA, chiremba chekunyora uye pasi rako repasita nezvose, zvakanyorwa zviri pachena uye motokari haina kupiwa kumapurisa emigwagwa mu ...
Sei ndichida chikwangwani pandinozvitengesa motokari? panguva ipi uye ndiani anoiumba? Ndiri kutengesa motokari
Sei ndichida chikwangwani pandinozvitengesa motokari? panguva ipi uye ndiani anoiumba? Ndiri kutengesa mishonga kubatsira-kuverenga hakuna munhu anoda! Zvakakwana kuti zvasaina DCP (kutenga chibvumirano chekutengesa), mafomu avo ...
Ndinonyora sei motokari isina magwaro?
How kupfeka rekodhi mudhudhudhu pasina magwaro? No dambudziko ... pachena kuti ... I vanofanira kuisa Midhudhudhu UCHT ON PASINA DOKUMENTOA .... Zvadaro unogona kutorwa kuimba yokuchema (kwete ...
tsika yemitemo yekudzivirira
tsika yekuchenesa tsika. Zuva rinosarudza mutemo pamaitiro, Nejini injini kusvika ku1000 cu. cm kusvika ku 3-x makore Dzinodhura kusvika ku8.500 euros 54% ye ...
nei mabhanhire madema?
nei mabhanhire madema? Nemhaka yokuti petori yakaipa kana makanga asina kukwana Mapepa anobvisa. Kuiswa kwejasi rakaoma kunoratidza hupfumi hwemafuta-air kana kuti gare gare kupisa. Zvinokonzera kushata, kuoma kutanga-up uye kusagadzikana ...
huwandu huwandu hwemashandisi anoshandiswa mumashini 2114!
huwandu huwandu hwemashandisi anoshandiswa mumashini 2114! Kana kuti inogona kunge yakagumburwa! Zvose zvinogona kuva! Nokuda kweizvi, nguva dzose inogadzirika!))) Tarisa tangi - pane kuvuza here? Tarisa pombiyumu pipinjini kune injini!
Zvinorevei: "Kutengeswa kwemotokari pafoni yepasipoti inoshandiswa kaviri uye haina kubviswa kubhuku"? izvi hazvikwanisi kuva. Ita mubvunzo wacho nenzira yakarurama Iko iwe wakatenga motokari sezvaunotaura ...
zvinorevei kuti zvakare kugadzirisa motokari?
zvinorevei kuti zvakare kugadzirisa motokari? Zvakanaka, hapana nzira ye500 rub ... Mari yacho inenge ine 100 rubles. + chirevo pamusoro pezvo - pamusoro pe2500, + inshuwarisi, inoti 4000, pamwe neIYO ...
Ndezvipi mapepa ezvinyorwa zvinodiwa kuti adzorerezve motokari kune mumwe munhu?
Ndezvipi mapepa ezvinyorwa zvinodiwa kuti adzorerezve motokari kune mumwe munhu? Zvinyorwa pamotokari (PTA uye chibvumirano chekunyora), chibvumirano chekutengesa, chikumbiro mu MREO pa-de-registration, munhu oga ...
Chii chiri kukwereta? Ndinganzwisisa sei ndakatenga motokari yebhajiro!
Chii chiri kukwereta? Ndinganzwisisa sei ndakatenga motokari yebhajiro! Kubhadhara ishoko kubva muchiito "lick". Fungidzira zvinorevei kutenga motokari yebhaji? vakatenga motokari muchikwereti zvinoreva kuti iwe iwe ...
Mibvunzo ye26 mu database yakagadzirwa mu 0,733 masekondi.